Semalt Expert: Iwe, Hongu, Iwe! Iwe Unoziva Chii Chinonzi Sprit Referrer Spam?
Kuendesa mweya kana kutumira spam ndiyo nzira yakaipa inoratidzika mubhuku reGoogle Analytics. Zvisinei, kana iwe ukanyatsoongorora kuti maitiro acho anobva kupi, uchaona kuti inobva kune imwe nzvimbo yekutsvaga webhusaiti uye uwedzere kutengesa kwaunoita kusvika pamwero mukuru. Parizvino, pane maviri mazana makuru evanhu vanofemerwa vanobata data yeGoogle Analytics. Kutanga, pane spam bots uye crawlers dzinongorodza ma webhusi enyu uye hazvibatsiri ma robots.txt mafaira. Rudzi rwechipiri nder Darodar, iyo inogona kuonekwa sehurongwa hwepamutemo hwekugadzira magetsi. Ryan Johnson, the Semalt Mutungamiri Akabudirira Mutengi, anotsanangura kuti nyaya huru ndeyokuti mweya kutumira spam kunobva kune dzakawanda domains, zhinji dzacho dziri mhemberero dzevanhu vakuru uye dzinowirwa mawebsite paawa.
Kusiyana pakati pe spam bots nehosthost referrals ndiyo hutsika yemugwagwa. Iko ghost referrer spam inotumira magwagwa kubva kune zvidzidzo zvitsva uye zvisingazivikanwi, asi hazviiti zvachose kushanyira mawebsite ako. Panzvimbo pezvo, vanosiya nzira dze digitairi dzinobata zvigwaro zveGoogle Analytics uye kuwedzera kukunda kwako. Vanotarisira kutevera maGoogle Analytics, uye iwe unogona kuvadzivisa nekugadzira mafaira mu-akhawunti yako. Nzira iyi, iwe uchakwanisa kumira mweya kutumira spam kubva pakuparadza data yako ye analytics.
Ghost referrer spam inokanganisa SEO yangu kana website?
Zvakachengetedzeka kutaura kuti mweya wekutengesa spam haikanganisi SEO yako kana webhusaiti. Sezvatave tatsanangurira kuti havakwanisi kushanyira webhusaiti yako asi kuratidzira pane zvinyorwa zvepaGoogle Analytics..Zvisinei, izvi ndizvo zvinoshandisa data yako uye analytics zvinyorwa. Iko ghost referrer spam inokanganisa nzvimbo yako zuva rose uye rinoratidzira kusvika kune rimwe chiuru hits mumaawa makumi maviri nemaviri.
Ghost referrer spam inoita zvinhu zvinotevera panzvimbo yako:
Inowedzera zvakanyanya kuwedzera kwekuwedzera kwemaji ako webhupu.
Inogona kuderedza nhamba yevashanyi ku blog yako kana nzvimbo.
Iyo inokwidza nyaya yekutsvaga uye inoita kuti ive yakaoma iwe kuti uone kana mutengesi uhu kana kwete.
Inodzivisa Goal Conversion uye nharaunda yenzvimbo, kukutumira zvakawanda zvekushanyira kubva kuRussia.
Vanotumira spammers vanoendesa sei dhenda kuGoogle Analytics account?
2. Vanosimbisa bots automating kuti inyore webhusaiti yako, kufambisa kurefera uye kuratidza zvakawanda zvekushanyira.
3. Vanogadzira bots chaiyo kuti vatumire dheseti kuGoogle Analytics uye usasanganisi kutumira nzvimbo.
Nzira yakanakisisa yekudzivirira ghost referrer spam ndeyokugadzira filters kana kuchinja yako .htaccess file. Iwe unogona kuumba mafaira akawanda sezvo iwe uchida kudzivirira kupotsa kunokonzera kuparadza data yako yeGoogle Analytics Source .